TPI Services - Shandong QILU Industrial & Trading Co., Ltd.
Bearings baolina lalina Groove
Inona avy ireo fanaraha-maso ataon'ny antoko fahatelo?
Isika rehetra dia nahita ny fitsirihana ny antoko fahatelo amin'ny fomba iray na amin'ny lafiny hafa. Ny sasany mahalala tsara azy io, fa ny sasany mety mbola manana fanontaniana vitsivitsy ao an-tsaina.
Ity lahatsoratra ity dia manolotra fijerena akaiky izay fanaraha-maso ataon'ny antoko fahatelosy ny zavatra mety ho azon'ny orinasa amin'izy ireo.
Ny Inspection an'ny antoko fahatelo , na TPI, no teny ampiasaina amin'ny serivisy fanaraha-maso tsy miankina tsy miankina omen'ny orinasa iray mahay.
Misy karazana fitsirihana telo mahazatra any. Ny fanaraha-maso ataon'ny antoko voalohany dia ataon'ny mpamorona irery. Ny fanaraha-maso ataon'ny antoko faharoa dia ataon'ny mpividy na ny ekipa kalitaon'ny mpividy ao an-trano.
Ny fanaraha-maso ataon'ny antoko fahatelo dia nataon'ny orinasa tsy miankina iray, mazàna ataon'ny mpividy, hahazoana antoka fa mifanaraka amin'ny fenitra kalitao ny vokatra rehetra ary mifanaraka amin'ny fenitra iraisampirenena eo amin'ny sehatry ny rafitra fitantanana kalitao (ISO 9001), sosialy ny vokatra rehetra. fomba fanao azo ekena (SA 8000) sy fitantanana tontolo iainana (ISO14000).
Ny iray amin'ireo tombony lehibe azo amin'ny fanaraha-maso ataon'ny antoko fahatelo, mifanohitra amin'ireo nataon'ny mpanamboatra na ny mpividy, dia ny fisavana tsy fitongilanana amin'ny lafiny roa ary afaka mamoaka didim-pitsarana ara-drariny nefa tsy manimba ny tombotsoan'ny andaniny. - raha, mazava ho azy, mitady ny mpanjifa sy ny fepetra apetraka. Amin'ny teny tsotra, ny fanapahan-kevitr'izy ireo dia tsy ho voataona fotsiny amin'ny zava-misy sarotra ary ny mpandray anjara amin'ny fizotry ny famokarana dia afaka mahazo sary mazava ny toerana misy azy ireo amin'ny tetik'asa ankehitriny.
Ny fanaraha-maso ataon'ny antoko fahatelo dia matetika ataon'ny orinasa manana mari-pahaizana ISO 9001, ary manana fahazoan-dàlana AQSIQ (rehefa manolotra serivisy any Shina ny orinasam-panaraha-maso kalitao) miaraka amin'ny traikefa mifandraika amin'izany, ekipa voaofana sy manam-pahaizana manokana amin'ny sokajy vokatra vitsivitsy na maromaro. Ny fisafidianana ny mpanome fanaraha-maso ny antoko fahatelo dia dingana iray lehibe amin'ny fiantohana ny fifehezana kalitao tsara ho tombontsoan'ny mpanjifa farany.
Handray tombony amin'ny fanaraha-maso ataon'ny antoko fahatelo ve ny orinasako?
Ny ankamaroan'ny orinasa dia mihevitra ny fandinihana ny antoko fahatelo ho fandaniana sahaza izany. Izy ireo dia tanterahan'ny orinasa manana fahaiza-manao matanjaka, miasa amin'ny tany isan'andro. Manome hevitra tsy miandany amin'ny kalitaon'ny entany izy ireo ary mamela ny masony hijery hatrany ny tsy fitovizan'ny kalitao amin'ny tranokala nefa tsy mila eo.
Amin'izany fomba izany, ny mpividy dia mahafantatra tsara na dia lavitra aza, ny fizotry ny famokarana, ary afaka manorina fifandraisana matoky amin'ny mpamatsy. Ankoatr'izay, na eo aza ny vidiny lafo, TPI dia mamonjy vola amin'ny alàlan'ny fanampiana amin'ny fisorohana fahadisoana lafo vidy na amin'ny fampiasana ekipa QC ao an-trano.
Fotoana ilaina ny fanaraha-maso ataon'ny antoko fahatelo
Miara-miasa amin'ireo mpamatsy vaovao
Famantarana olana ara-kalitao ara-potoana
Ny olana momba ny kalitaon'ny vokatra miverimberina (saingy aleonay miala amin'izany famaranana izany sy mijery ny entana ho an'ny entana rehetra, amin'ny dingana samihafa amin'ny fizotry ny famokarana - ho kely kokoa ny vidiny raha tokony hamaha ny olana momba ny kalitao amin'ny mpamatsy ny entana efa nalefa. )
Mividy entana premium: fitaovana elektronika avo lenta, fitaovana indostrialy sns.
Raha liana amin'ny serivisy fanaraha-maso avy amin'ny antoko fahatelo ianao, aza misalasala mifandray aminay, faly izahay manombana anao!
Ahoana ny fomba fanadiovana ny vy tsy misy karbaona
Carbon vy dia manana fampiharana maro. Amin'ny maha fitaovana matanjaka azy io dia ampiasaina amin'ny fananganana tranobe, fitaovana, fiara ary fitaovana. Ny vy karbona dia tena mora simba, ka amin'ny tranga maro, ny vy dia manana lay-porofy harafesina ...
© Copyright - 2017: Zo rehetra voatokana. - Herin'ny Globalso.com